eNasha.com - युवराज ऴामा
एउटा भारी भरकम परिवार थियो उनको बाबाको । आठ जना परिवारमध्ये सबैभन्दा कान्छा उनका बाबा । उनका हजुरबुवा काभ्रे वरपरका चार जिल्ला हेर्ने मुखिया थिए । उनका बाबा दुर्गराज लामा पनि सक्रिय व्यक्ति थिए । कतिसम्म भने बुवाको बिँडो थाम्नका लागि कानूनी कुराहरु जान्नु पर्ने भएकाले त्यसबेला उनी पूर्व ३ नम्बर भनिने भोजपुर गएर एक जना व्यक्तिसँग मीत लगाएर बाहुनहरुको भीँडमा साधारण लेखपढ गर्न जान्ने बनेका थिए । लामा भएकाले धार्मिक र सांस्कृतिक लेखपढ त स्थानीय गुम्बामा थियो नै त्यसपछि नेपाली भाषामा लेखपढ गर्न जान्ने भएपछि उनले प्रशस्त अवसर पाइने अनुभव पनि गरेका थिए । त्यसैबेला भीमखुरे गाविसमा कृष्णमायाको कोखमा युवराज लामा २०१६ साल असोज २९ मा जन्मिए । चार दिदी र एक बहिनी पनि थपिएपछि उनका बाबालाई परिवारको लालनपालनका लागि बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले अवसरको खोजीमा तर्राई झरे । समयक्रममा दुइ दिदीको अकालमा मृत्यु भयो ।
तराइ झरेपछि आफ्ना सन्तानको लालनपालनसँगै पढाइमा सचेत उनका बाबाले आफ्ना सन्तानलाई स्थानीय स्कूलमा भर्ना गरिदिए । यो स्कूल थिएन पहिले, एक जना पढेलेखेका व्यक्तिको घरमा उनीहरुलाई पढ्ने व्यवस्था थियो । उनी र उनकी बहिनी पहिलो विद्यार्थी थिए ती गुरुकहाँ । गुरु दक्षिणाबापत् उनीहरुले चामल वा पैसा लिएर जानु पर्दथ्यो । पछि ती गुरुकहाँ निकै विद्यार्थी थपिए । र, गाउँमा एउटा स्कूलकै आवश्यकता महसूस भयो । जनश्रमदानले त्यहाँ स्कूल बन्यो । प्राथमिक शिक्षा त्यहाँ सकिएपछि उनी दरबार हाइस्कूलमा पढ्न थाले र त्यहीँबाट २०३१ सालमा एसएलसी पास भए ।
एसएलसीपछि भने उनले वीरगञ्जको ठाकुरराम क्याम्पसमा मानविकीमा भर्ना भए । त्यो बेला क्याम्पस पढ्ने मंगोल अनुहारका उनी मात्र एउटा अनुहार थिए । परैबाट उनलाई चिनिन्थ्यो । त्यहाँ उनी कहिल्यै पनि दोस्रो भएनन्, पढाइ, खेलकूद र प्रेममा पनि ! उनले त्यहीँ पढ्ने एक नेवार बालालाई मन पराए ।
घरको एक्लो छोरा भएकाले उनी बढी पुल्पुलिएका थिए नै रिस पनि नाकको टुप्पोमा थियो । कसैले उनलाई केही भनेको नसहने ! घरबाट निस्किएपछि त उनी वरपरका जंगल चहार्ने र कहिलेकाहीँ त जंगलमै बसुँजस्तो उनलाई लाग्थ्यो तर बाघभालुको डर लाग्थ्यो । उनी खोलाको तीरैतीर बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँडिदिन्थे ।
'अहिले सम्झँदा यस्तो लाग्छ, म सानैदेखि नै 'खोज'मा थिएँ । बढी स्थायी खुशीको खोजीमा थिएँ', युवराज दरबारमार्गस्थित आफ्नो अफिसको कुर्सिमा गजधम्म बस्दै बताउँछन्- 'यही बानीले कहिल्यै पनि एउटा पेशामा सीमित भएर रहन सकिनँ । बढीभन्दा बढी राम्रो कुराको खोज पछिसम्म चलिरहृयो । त्यो स्थायित्व चाहिँ सिनेमाले नै दियो ।'
उनी कतिसम्म रिसाहा थिए भने- एक पटक जिस्किएर एक गुरुले उनलाई पछाडिबाट धाप मारे । त्यो धाप उनको कलिलो शरीरमा गति चोटपर्ूण्ा भएछ, बालक युवराजले सहन सकेनन् । त्यसपछि ती गुरुलाई स्कूलदेखि घरसम्म आउँदा लाग्ने समय करिब २२ मिनेट मनपरि गाली गर्दै आइपुगे ।
युवराजको स्कूले पढाइमा अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग गढ्यो । अंग्रेजी भाषामा उनको राम्रै दखलका कारण एसएलसी सकिएपछि नै उनले वीरगञ्जको एउटा होटलमा पार्ट टाइम काम पाइसकेका थिए । पार्ट टाइम कामसँगै उनले क्याम्पसको पढाइ जारी राखे ।
क्याम्पसमा उनी परैबाट बेग्लै देखिन्थे र पढाइमा पनि निकै जान्ने भएकाले उनीको वरपर केटाकेटीहरु झुम्मिरहन्थे । त्यीमध्ये समूहमै राम्री देखिन्थिइन् एउटी युवती । कम बोल्ने र बौद्ध दर्शनमा अति प्रभावित ती युवती आफूसँग कम बोले पनि झुम्मिने बानीले प्रेम प्रस्ताव राखिहाले । 'ढिला गर्नु हुन्न, भएन त भएन' भन्ने उनको दर्शन थियो जिन्दगीको ! ती युवती नै पछि उनकी श्रीमती बनिन् र चिनिइन्- मंगलादेवी न्यासुरको नामले । मंगला अलि लजालु भएकीले त्यतिबेला जवाफ त फर्काइनन् तर पहिलेझैँ झुम्मिन छाडिनन् । त्यसपछि एउटा शालिन डेटिङ हुन्थ्यो उनीहरुको क्याम्पसभित्र र क्याम्पसबाहिर पनि !
तीन वर्षो लामो प्रेमप्रसङ्गपछि उनले २०३५ सालमा बिहे गरे । बिहे कसरी गरे भने मंगलालाई उनले घरबाट भगाएर भागलपुर लिएर गए । तर उनका पिता न्यायाधीश थिए अनि उनकै घरमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डेरामा बस्थे । निकै शक्ति लगाएर उनीहरु दुवैलाई भागलपुरबाट झिकाइयो । केही महिना छुट्टिए पनि युवराजले मंगलालाई पुनः भगाई छाडे । यसपछि भने उनका बुवाआमाले उनीहरुलाई पछ्याउन छाडे ।
उनले मंगलालाई घरमा भित्र्याए । लामा विधिअनुसार उनीहरुको बिहे भयो ।
बिहे के भएको थियो, त्यसपछि उनले बढी नै जिम्मेवार महसूस गरे । एउटा बेग्लै पहिचान र नामका लागि उनको हृदयले संर्घष गर्न थाल्यो । त्यसैले उनी काठमाडौँ आए, श्रीमतीसहित । काठमाडौँ उनी के आएका थिए, जिन्दगीको असली संर्घष्ा चाल पाए । भन्ने बित्तिकै काम नपाइने र पाइएको काम पनि उनले सोचेजस्तो नहुने । त्यसैले कति दिन त उनले भोकभोकै रात बिताउनु पर्‍यो । खाना खाने पैसा नहुँदा मंगलाले भन्ने गर्दथिन्- 'आज मेरो ब्रत छ तपाइँ के गर्नुहुन्छ -' अनि युवराजले पनि भन्थे- 'त्रि्रो ब्रत हो भने म चैँ कसरी खान सक्छु र ?'
त्यतिबेला भनसुनको जमाना थियो । चिनेको मान्छे भयो भने मात्र काम पाइन्थ्यो । उनलाई भनसुनको कुरा ज्यादै मन नपर्ने ! उनी आफ्नै बुतामा काम पाउन चाहन्थे । एक पटक अखबारमा विज्ञापन निस्कियो, सोल्टी होटलमा सहायकको । उनले त्यहाँ अन्तरवार्ता दिए । दुइ-दुइ वटा अन्तरवार्तामा प्रथम भएपछि उनलाई साथीहरु पार्टी ख्वाउन आग्रह गरे । अन्तिममा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने थियो । उनमा चुरोटको लत थियो । चुरोटको लतले गर्दा परीक्षणमा एउटा साधारण समस्या देखियो छातिमा । अहिले उनी सम्झन्छन्- त्यो समस्या त चुरोट खाने हरकोहीमा हुँदोरहेछ । म लामा भएका कारण त्यहाँ जागीर पाइनँ । मेरो पहुँच पनि नभएकाले गर्दा त्यहाँ म छनोट हुन सकिनँ । त्यो डाक्टर राणा थियो र सैनिक अस्पतालको डाक्टर थियो । मलाई फेल गराउन त्यसको ठूलो हात रहृयो ।
साथीहरुलाई पार्टी दिइसकेकाले त्यो होटलमा काम नपाउनु उनका लागि ठूलो चोट थियो । तर त्यतिबेला नै उनको एउटा साथीले ठमेलको कार्पेट बेच्ने पसलमा काम लगाइदियो । त्यहाँ उनको अंग्रेजी राम्रो भएकाले काम तुरुन्त पाए र संयोग कस्तो रहृयो भने उनी काम माग्न गएकै क्षण एउटा टुरिस्टलाई सामान बेच्न सफल भए । त्यसपछि उनले त्यहाँ साढे चार सय मासिक तलबमा काम गरे । अब भने उनलाई काठमाडौँमा बाँच्न सफल भए ।
उनले एक वर्षछि आफ्नै प्रयासमा दरबारमार्गमा थान्काको पसल थापे । यसमा उनका अझै तीन जना पार्टनर छन् ।
सन् १९८४ तिर पसलबाट पाइने फूसदमा थानेश्वर र्राईसँग मार्शल आर्ट सिक्न थाले । त्यो सिकिसकेपछि उनी अरुलाई पनि मार्शल आर्ट सिकाउन थाले र त्यहीँ सिक्ने समूहमा अहिलेका चर्चित सिनेमा र टेलिभिजनको छायाँकार जावेद शाह पनि थिए । जावेदले पहिलो पटक सिनेमामा काम पाउने भए, सिनेमाको नाम थियो- भाग्यरेखा । त्यही सिनेमामा द्वन्द्व निर्देशकको कामको जिम्मा युवराजलाई दिने भए ।
भाग्यरेखामा उनी द्वन्द्व निर्देशक र कलाकारका रुपमा छिरे । त्यहाँ उनले चलचित्रमै पहिलो पटक मार्शल आर्ट छिराए । नयाँ किसिमको द्वन्द्व शैली भएकाले दर्शकले त्यो रुचाए । उनकै शिष्यको समूहमा चलचित्र निर्देशक राजेन्द्र शलभका भाइ पनि थिए । त्यसबेला राजेन्द्रले विजय पराजय बनाउँदै थिए । त्यहाँ युवराजले प्रवेश पाए । चिनोमा पनि उनको भिन्न प्रकृतिको काम भएकाले तुलसी घिमिरेले पत्याए । चिनोमा तुलसी घिमिरेको काम गर्ने शैली मन पराएर उनले निर्ण्र्ाागरे- मेरो हृदयले खोजेको चिज त सिनेमा रहेछ । यहाँ त विविध शैली र शिल्प उपयोग गर्न सकिने रहेछ ।
त्यसपछि उनले दुइ थोपा आँशुमा मौन निर्माताको रुपमा काम गरे । त्यो अनुभवले उनलाई 'देउता'मा लगानी गर्न उक्सायो । उनी देउतामार्फ निर्माता बने ।
उनले त्यसपछि प्रतीज्ञा र जीवन संघर्ष सिनेमा बनाए । ती दुवै सिनेमा यति असफल भयो कि उनी आर्थिक रुपमा समेत धर्मराउने स्थितिमा पुगे । तर उनले हिम्मत हारेनन् । उनले देउराली सिनेमा निर्माण गरे । थोरै लगानीमा आकर्षक सिनेमा बनाएपछि कर्मा शेर्पाले उनलाई देशपरदेश निर्देशन गर्न अनुरोध गरे । त्यस्तै उनले राजेन्द्र मानन्धरले देवदूत बनाउन अनुबन्ध गरे । उनले आफैँले दुलाहा राजा दुलही रानी पनि बनाइरहेका थिए । त्यस वर्षत उनले एक साथ चार सिनेमा बजारमा ल्याए । त्यसपछि उनको संघर्षबाट प्रभावित सिने उद्योगका व्यक्तिहरुले उनलाई चलचित्र निर्माता संघको अध्यक्षसमेत चुने ।
सिने उद्योगमा उनले २० वर्षलगानी गरिसकेका छन् भने त्यसयता उनले १२ वटा चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन् । उनले लगानी र सहलगानी गरेका चलचित्रको संख्या १८ पुगिसकेको छ । उनी अझै थाकेका छैनन् । उनले नयाँ सिनेमा धर्मयुद्ध बनाउने सही समय पर्खिरहेका छन् ।
सिनेमा नथाकिने युद्ध
संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवसाय उनी सिनेमालाई मान्दछन् । किनभने यो संसारकै सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय हो । यसले एक साथ कला, संस्कृति, व्यापार, व्यवसायसँगै कलाका सातै रुप, लेखन र लिडरशिप सिकाइरहेको हुन्छ । यस्तो विश्वविद्यालयमा आएर उनी जीवनको मध्य समयमा पढिरहेका छन्, सिकिरहेका छन् । 'यो पेशाबाहेक अरुमा म कहिल्यै लामो समयसम्म टिक्न सकिनँ किनभने यसले मलाई यति धेरै कुरा सिकाएको छ कि ती कुराहरु अन्य व्यवसायमा एकै पटक सिक्न सकिँदैन", उनको अनुभव बोल्छ ।
उनी जारी राख्छन्- 'शुरुमा मैले चलचित्र निर्माण गरेर लगानी कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने सिकेँ । निर्देशनको शुरुवात गरेर लिडरशीप सिकेँ । निर्देशन गर्दै जाँदा लेखनको महत्व बुझेर लेख्न सिक्न थालेँ । मलाई यो बताउनुहोस्, संसारको त्यस्तो कुन व्यवसाय छ जसले एक साथ यति धेरै कुराहरु सिकाउँछ !"